Kooxda dhibtooneysa ee la meel lagu kaydiyo hooseeyo ku saabsan qalabka iOS9? Waa hagaag, tani waa kiiska ula inta badan isticmaala, marka loo fiiriyo in ay jirto wax aan ka mid ah ballaarinta xusuusta mid ka mid ah aaladaha Apple. Waa maxay sababta ay u dhacaan in kastoo in meel bannaan oo ay noqoto arrin inta badan oo ka mid ah dadka isticmaala macruufka? qalabka macruufka waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ugu jiraan in ay ku kaydiso iyo muusiko dhegayso, ciyaaro videos guji sawirada. Dhammaan hawlgalladaasi waa meel ilaa xad wax baabbi'iya oo la xasuusta go'an in qalabka macruufka, kaydinta ha dhawaado ama hoos u yahay qof walba. Sabab kale oo ay noqon kartaa wax badan oo aan la rabin barnaamijyadooda ku qalab aad, cunista galay kaydinta la heli karo.
Hadda, in aan ognahay waxa ay keenaysaa in meel bannaan oo hoos on qalabka macruufka, aynu aad u soo bandhigo in xalka ugu fiican la xorayn, ilaa tan meel lumay; kulmaya Wondershare SafeEraser, codsi ah in si degdeg ah oo lacag la'aan kartaa xasuus ku saabsan qalabka macruufka iyada oo ay ka saareen khasnado aan la rabin, files aan waxba ka jirin oo dheeraad ah.
Halkan waxaa ku qoran liiska oo faahfaahsan waxa codsiga waxan oo dhan ayaa kuu sameyn karo.
• masixi faahfaahintaada shakhsi ahaaneed si buuxda iyo ma ahan oo keliya iyaga tirtirto
• Hubi in xogta aad (Browsing internetka, fariimaha, Chine in aad isticmaasho iwm) ayaa weli gaarka loo leeyahay iyo unrecoverable
• Wuxuu ka caawiyaa in si buuxda oo joogto ah tirtiro qalab aad ay dhacdo in aad ka fekereyso inaad iibinta, warshadaynta ama waxa Ganacsi
• Ka saar junk oo dhan (files rabin iyo barnaamijyadooda)
• Taageerada liis dheer oo nooc file
• badbaadi ku meel lagu kaydiyo qalab aad by compressing sawiro
3.481.186 oo qof ayaa u soo bixi
1. files junk Clear
• Download iyo rakibi Wondershare SafeEraser oo abuurtaan. Riix 'Nadiifinta Express' doorasho.
• Hit badhanka Start Scan si ay u bilaabaan iskaanka for files junk ku saabsan qalabka macruufka. Marka scan la dhammeeyo, SafeEraser muujin doonaa liis ka kooban dhammaan faylasha junk la tirada kala faylasha sida ka.
• Dooro noocyada file aan loo baahnayn oo guji masixi Hadda. Oo dhan files junk Tani nadiifiso doonaa qalab macruufka iyo soo bandhigaan natiijooyinka nadiif ah ilaa uu furmo suuqa soo socda. Haddii loo baahdo, kuwaasoo ah idinka ee riixi kartaa nooca file kasta si ay u arkaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan files junk shaqsi dooro waxa aad u baahan tahay saaro iyo tirtirayaa kaliya.
2. saar barnaamijyadooda la isticmaalin
• Burcad SafeEraser oo guji 'isticmaalin App Eliminator'. Dhinaca gacanta midig oo uu furmo suuqa, guji badhanka Start Scan si ay u bilaabaan raadinaya dhan barnaamijyadooda la isticmaalin ku saabsan qalabka macruufka.
• Suuqa ayaa soo socda waa in ay muujiyaan horumarka scan hadda iyo in dhameysan waa in a ilbiriqsi yar.
• In uu furmo suuqa soo socda oo muujinaya natiijooyinka scan, oo dhan Chine in aan la isticmaalin ee 30 maalmood ee la soo dhaafay waa in lagu muujiyaa.
• By default, oo dhan laga daadiyo waa in la hubiyaa / horey u soo xulay, waxaad samayn kartaa dooro kuwa aad rabto in aad ka saartid ka dibna riix on uninstall badhanka si ay u bilaabaan ka saareen, kuwaas oo Chine.
• Marka samaysay bogga xiga idin tusin doonaa natiijooyinka la qadarka bannaan in aad ay awoodaan si loo badbaadiyo ee geedi socodka.
3. Clear tirtiro xogta si buuxda
• Laga soo bilaabo bar dhanka bidix, dooran masixi tirtiray Files kadibna riix Start Scan sidii dhammaan tallaabooyinka hore.
• Marka scan la dhammeeyo, waxaad arki doontaa liiska dhammaan noocyada xogta la tirtiro iyada oo tirada files in mid kasta oo iyaga ka mid ah. Dooro kuwa aad jeclaan lahayd in uu si buuxda u masixi iyo masixi badhanka ka dhacay Now.
• Bogga / suuqa kala socda waa in loo xaqiijiyo ka kaxayntu ay si guul leh dhammaan macluumaadka sida loo baahan yahay.
4. cadaadi sawiro si loo badbaadiyo meel ilaa 75%
• Dooro 'Photo hawadda ka galeeysid menu bidix oo ka dhacay on Start Scan si ay u bilaabaan iskaanka sawiro badan oo ku saabsan qalabka macruufka.
• Bogga soo socda, mar baaritaan ku dhamaato, idin tusin doonaa dhammaan sawirada in ay yihiin mid aad u ballaaran iyo sidoo kale ku siin qiyaasta inta meel aad ku badbaadin karaan iyaga compressing.
• Xusuuso in haddii aad guji Jidka kaabta (soo socda si badhanka 'cadaadi hadda') waxay ku tusi doonaa goobta default / gurmad jidka u dhan photos asalka iyo ha aad xulan meel aad doorato haddii loo baahdo. Marka sameeyo, riix OK ka dibna 'cadaadi hadda' si ay u bilaabaan compressing sawirada.
• Hadda, geeddi-socodka compressing waa inay qaataan dhowr ilbiriqsi oo kaliya oo ka dibna soo bandhigaan page natiijadii aad u.
> Resource > Clean-up > Sidee oo bilaash ah ilaa Space More on macruufka Your 9 Device